Aso Jehovah Adasefo Asesã Bible No Ma Ɔnye Hɔn Gyedzi Ahorow Ehyia? | FAQ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian America Mmum Kasa Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bosnian Boulou Bulgarian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Chol Chuvash Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Digor Dutch Edo English (Borɔfo) Estonian Ewe (Awona) Faroese Finnish Fon French Ga (Nkran Kasa) Galician Garifuna Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kabyle Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Korean Krio Kwangali Kwanyama Lingala Lithuanian Low German Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mapudungun Maya Mazatec (Huautla) Mende Mfantse Mingrelian Mixe (North Central) Mongolian Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Nias Norwegian Nzema Oromo Otetela Pangasinan Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Rarotongan Romanian Romany (Romania) Russia Mmum Kasa Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swati Swedish Sãotomense Tagalog Tahitian Tajiki Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tsonga Turkish Turkmen Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Welsh Xhosa Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Aso Jehovah Adasefo Asesã Bible No Ma Ɔnye Hɔn Gyedzi Ahorow Ehyia?
Oho, yɛnnyɛɛ dɛm. Dza ɔnye iyi bɔ ebira no, sɛ yebohu dɛ hɛn gyedzi ahorow bi nnye Bible no nnhyia pɛpɛɛpɛr a, yɛsesã hɛn gyedzi ahorow no mbom.
Nna yɛhwehwɛ Bible no mu mpo dadaadaw ansaana yɛrehyɛ ase ayɛ New World Translation of the Holy Scriptures no wɔ afe 1950 mu. Yɛdze nkyerɛase ahorow biara a nna ɔwɔ hɔ no yɛɛ edwuma, na yɛdze hɛn gyedzi ahorow gyinaa do. Susũ Jehovah Adasefo hɔn tsetseetse gyedzi ahorow bi ho hwɛ, na woarankasa si ho gyinae hwɛ dɛ ɔnye dza Bible no kyerɛkyerɛ ankasa no hyia anaa.
Dza yɛgye dzi: Nyankopɔn nnyɛ Baasakor. July 1882 Zion’s Watch Tower no kãe dɛ: Hɛn akenkamfo nyim dɛ, ɔwɔ mu dɛ yɛgye Jehovah, Jesus, nye sunsum Krɔnkrɔn no dzi dze, naaso yɛpow nkyerɛkyerɛ a ɔnye dɛ Nyame baasa na wɔkã bɔ mu yɛ nyimpa kor, anaadɛ nyimpa baasa na wɔkã bɔ mu yɛ Nyame kor no, yebu no dɛ onngyina Kyerɛwnsɛm no do.”
Dza Bible no kyerɛkyerɛ: “Jehovah hɛn Nyankopɔn no yɛ Jehovah kor.” (Deuteronomy 6:4, The Holy Bible, a Robert Young kyerɛwee no) “Nyankopɔn kor na ɔwɔ hɔ, Egya no a adze nyina fir no mu, na hɛn so yɛwɔ hɔ ma no; nye Ewuradze kor Jesus Christ, a adze nyina nam no do, na hɛn so yɛnam no do no.”(1 Corinthfo 8:6, American Bible Union Version) Jesus nankasa kãe dɛ: “Egya no yɛ kɛse sen Me.”​—John 14:28, Douay-Rheims Version.
Dza yɛgye dzi: Wɔnnyɛ nyimpa ayakayakadze daa wɔ hellgya mu. Aber a June 1882 Zion’s Watch Tower a woyii n’asɛntsir “Bɔn Akatua Nye Owu” fii Romefo 6:23 a ɔwɔ King James Version no mu no rekã kyerɛwsɛm yi ho asɛm no, ɔkãe dɛ: “Hwɛ mbrɛ asɛmfua yi mu da hɔ na ntseasee wɔ mu. Naaso ɔyɛ nwanwa dɛ nyimpa pii a wɔdɛ wɔgye Bible no to mu dɛ Nyankopɔn Asɛm no kɔ do ara kyerɛkyerɛ biribi a ɔnye asɛm yi bɔ ebira. Dɛm nkorɔfo yi si no pi dɛ dza wɔgye dzi, na dza Bible no so kyerɛkyerɛ nye dɛ, bɔn akatua nye onnyiewiei nkwa wɔ ayakayakadze mu.”
Dza Bible no kyerɛkyerɛ: “Ɔkra a ɔyɛ bɔn no, ɔnoara na obowu.” (Ezekiel 18:​4, 20, King James Version) Asotwe a odzi ekyir ma hɔn a wɔsoɛr tsia Nyankopɔn no nnyɛ onnyiewiei ayakayakadze, na mbom “ɔsɛɛ a onnyi ewiei.”​—2 Thessalonicafo 1:9, King James Version.
Dza yɛgye dzi: Nyankopɔn n’Ahenman no yɛ aban ankasa, na nnyɛ biribi a ɔwɔ akoma mu. December 1881 Zion’s Watch Tower no kãa faa Nyankopɔn n’Ahenman no ho dɛ: “Dza ɔkã ahenman yi a wɔdze besi hɔ no ho nye dɛ, wobeyi ahendzi ahorow a ɔwɔ asaase yi do no nyinara efi hɔ.”
Dza Bible no kyerɛkyerɛ: “Na ahemfo no hɔn nda no mu na ɔsor Nyankopɔn bɛma ahendzi a wɔrennsɛɛ no da, eso wɔrenndan n’ahendzi nngya ɔman fofor bi do; na obobu ahendzi yinom pɔsɔpɔsɔ na ɔama ɔasã, na ɔnodze begyina daa.”​—Daniel 2:​44, King James Version.
Aso Jehovah Adasefo gyina New World Translation no nkotsẽe do na wɔkyerɛkyerɛ hɔn gyedzi ahorow mu?
Oho, yɛkɔ do dze Bible nkyerɛase ahorow pii dzi dwuma wɔ hɛn asɛmpakã edwuma no mu. Nokwasɛm nye dɛ, aber a yɛma afofor New World Translation no kwa dze kã hɛn Bible adzesũa ho nhyehyɛɛ a yɛnngye hwee no ho no, hɛn enyi so gye ho dɛ yɛnye afofor a wɔpɛ dɛ wɔdze nkyerɛase afofor dzi dwuma no bosũa adze.
Yɛbɛyɛ dɛn agye edzi dɛ ndɛ yɛwɔ dza Bible no kyerɛkyerɛ ankasa no mu ntseasee a ɔyɛ nokwar?
Fa mona Fa mona Aso Jehovah Adasefo Asesã Bible No Ma Ɔnye Hɔn Gyedzi Ahorow Ehyia?